Ogaden News Agency (ONA) – Khaa’inka Goorma ayuu Qoslaa ama Ooyaa? Isaga iyo Taariikhda Colaad Umbaa Dhex Taala
Khaa’inka Goorma ayuu Qoslaa ama Ooyaa? Isaga iyo Taariikhda Colaad Umbaa Dhex Taala
Dad badan ayaa waxay isweydiiyaan sababta keenta inuu qof siduu u joogay hal mar un la arko isagoo la coloobay dadkuu la dhashay, eheladiisii iyo qofkastoo uu wanaag ka dhexeeyay. Marka la arko isagoo cadawgiisii shalay u adeegaya oo midkay isku xan qarsanayeen u qoolaya. Inkastoo ay xanuun badan tahay qofka inuu arko saaxiibkiisii shalay ay wada qoslayeen oy isku xan qarsanayeen oo isagii ku soo jeedsaday ama u gacangaliyay cadawgoodii shalay. La yaabkaasoo idil qofkii yaqaana tilmaamaha Khaa’inka ama yaqaana siduu ku bilowdo kuna dhamaado khaa’inka waxay ugu muuqani qof isaga is-haligay oo daadka qaaday doonaya inuu kaga badbaado kolba qofkii u soo dhawaada inuu luqunta isaga maro.
Markaan meela badan ka fiiriyay, khaa’in waa midka khiyaana qof ama dad waqti loo baahan yahay daacadnimo. Xataa qof saaxiibkaa ah markuu ka aamuso meel aad uga baahnayd inuu ka hadlo wuxuu noqonayaa qof khiyaanay saaxiibtinimadii idiin dhaxaysay. Noocya badan oo khaa’imiin ah ayaa jira, hasa ahaatee Khaa’inka ugu xun waa midka diintiisa oo la dhibaataynayo dantiisa gaarka ah ka raacda oo naftiisa oo kali ah ay u muuqato. Waxaa ku ladhan midka isagana siduu dantiisa gaarka ah u ilaashan lahaa darteed dhibaato ugu gaysta dalkiisa iyo dadkiisa. Khaa’innimado waa arin aad u liidata oo qofna uusan jeclayn, oo xataa midka bulshada oo idil ay ogtahay inuu yahay khaa’in majecla in lagu sheego, dhamaan falalka uu samaynayana waxay u leeyihiin magacyo iyo sharaxaad ka duwan midka ay bulshada u taqaano.
Waxyaabaha kalee lagu tilmaamay khaa’inka waxaa ka mid ah aqoon kastoo uu leeyahay inuu jaahil ka yahay aqoonta Taariikhda. Inkastoo laga yaabo inuu yahay khaa’inka nin caqli badan laakiinse jahliga ka haya taariikhda, ama aanu jeclayn inuu dib u fiiriyo taariikhda ayaa ka qaadaysa sariigta (xishoodka). Sidaa darteed ayaa laga yaabaa inaad aragto qof loo hanweynaa oo khaa’inimo ku dhacaya, sababtoo ah haduu u fiirsan lahaa taariikhda wuxuu ku ogaan lahaa inuusan jirin qof cadawgii umadiisa u shaqeeyay ama la shaqaystay oo taariikhda ay xustay. Meesha ay taariikhda xusto oo kali ah shaqsigii dhigii ahaa xagga aqoonta iyo caqliga iyo dadnimada ee diiday inuu danihiisa gaarka darteed u raaco cadawga umadiisa.
Marka ugu dambaysa Khaa’inka wuxuu gaadhaa heer uu isagii naco khaa’inimada. Markuu ka go’o bulshadiisa, gaar ahaan eheladiisa iyo saaxiibada kuway isugu dhawaayeen, isla markaana uu soo taabto meesha ugu sareysa een loo ogolayn inuu sii dhaafo, taasoo ka duwan siduu filan hayay, ayaa waxaa ku dhaca niyad jab iyo inuu xasuusto intuu qof dadkiisa ah dilay, naafeeyay, agoonteeyay ama dalka dartii uga carartay.
Waxaa la ogaaday in marka ay Dadkiisa Barooranayaan uu Khaa’inka Qoslo, markuu Isaga Barooranayana ay Qoslaan oo dhabarka u duwaan dadkiisa/eheladiisa. Waxaa kaloo la ogaaday in markuu ku Qoslayo Khaa’inka Baroorta Dadkiisa/eheladiisa uuCadawgana ku Qoslayo Isaga, oo markuu Barooranayo ee dadkiisa/eheladiisa ay ku Qoslayaana uu Cadawgiisii ku Qoslayo hadana.
Taariikhdaa waa maguuraan.
Khaa’inka laba jeeraba cadawga ayaa ku qoslaya!